I-Brinker International yapapasha iziphumo ezikhethiweyo ze-Q1 2022
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » I-Brinker International yapapasha iziphumo ezikhethiweyo ze-Q1 2022
IBrinker International, Inc. (NYSE: EAT) namhlanje ibhengeze iziphumo zoshishino ezikhethiweyo kwikota yokuqala yemali ka-2022 kwaye ibonelele ngohlaziyo lweshishini kwikota yesibini yemali ka-2022 phambi koSuku lwabaTyali-mali lweBrinker oluza kubanjwa ngo-Okthobha wama-20, ngo-2021. .
“Ikota yokuqala ka-Brinker yazisa intengiso encumisayo kwaye iqhubekile nokugqitha kakhulu kwishishini lezendlela,” utshilo u-Wyman Roberts, iGosa eliyiNtloko lesiGqeba kunye noMongameli. “Kodwa ukwanda kwe-COVID okuqale ngo-Agasti kuye kwawenza mandundu umceli mngeni wabasebenzi kunye nemveliso kwaye kwachaphazela imida yethu kunye neyona nto iphambili kunokuba besilindele. Sisabela kwezi ziphendupheko ze-COVID ngokugxila okwandisiweyo ekuqeshweni nasekugcineni iinzame, kunye nokusebenzisana namahlakani ethu ukufumana uzinzo olongezelelekileyo kwimekobume yobonelelo. Ukongeza, sithathe amanyathelo okunyusa amaxabiso kwangoko, sanyusa usukelo lwethu lonyaka wonke ukuya kwi-3% - 3.5%, ukuphelisa iindleko zokunyuka kwamaxabiso kunye nokukhusela imida njengoko sisiya phambili."
Imali ye2022 Amagqabantshintshi - Ikota yokuqala
Intengiso yeNkampani yeBrinker International kwikota yokuqala yemali ka-2022 inyuke yaya kutsho kwi-859.6 yezigidi zeedola xa kuthelekiswa ne-728.2 yezigidi zeedola kwikota yokuqala yemali ka-2021.
Ingeniso yokusebenza kwikota yokuqala yemali ka-2022 inyuke yaya kutsho kwi-25.6 yezigidi zeedola xa kuthelekiswa ne-24.4 yezigidi zeedola kwikota yokuqala yemali ka-2021. Ingeniso yokusebenza, njengepesenti yeengeniso ezipheleleyo, kwikota yokuqala yemali ka-2022 yehle ukuya kwi-2.9% xa kuthelekiswa ne I-3.3% kwikota yokuqala yemali ka-2021.
Umda wokusebenza kwendawo yokutyela, njengepesenti yeentengiso zeNkampani, kwikota yokuqala yemali ka-2022 yehle yaya kutsho kwi-10.4% xa kuthelekiswa ne-11.6% kwikota yokuqala yemali ka-2021.
Abaqhubi abaphambili bokwehla komda wokusebenza kweNdawo yokutyela yayili-150 bps yeendleko eziphezulu zokusebenza kwindawo yokutyela kunye ne-60 bps yeendleko eziphezulu zemveliso. Iindleko zabasebenzi kwindawo yokutyela zonyukile ngenxa yexabiso lemarike kunye nokunyuka kokufaneleka. Ukonyuka kwexesha elongezelelekileyo okwethutyana kunye neendleko zoqeqesho nazo zibe negalelo ekonyukeni.
Ingeniso eseleyo ngesabelo esihlanjululweyo, ngokwesiseko se-GAAP, kwikota yokuqala yemali ka-2022 inyuke yaya kutsho kwi-$0.28 xa kuthelekiswa ne-$0.23 kwikota yokuqala yemali ka-2021.
Ingeniso eyintsalela ngesabelo esihlanjululweyo, ngaphandle kwezinto ezikhethekileyo, kwikota yokuqala yemali ka-2022 inyuke yaya kutsho kwi-$0.34 xa kuthelekiswa ne-$0.28 kwikota yokuqala yemali ka-2021.